Ezimweni eziningi, kukhona ukuzibona ngiyisiphukuphuku ku kwasebuntwaneni bese ulandelwa indoda konke ukuphila kwakhe, kanye ukwesaba zezingane, okuyinto vele omdala kunzima ukulwa. Engaqondile olukhulunywa izwi e ikheli ingane phambi kwakhe mayelana nokubonakala, amakhono, nezimfanelo kungaba legumbi lapho kamuva ukwakha bebancane eziyinkimbinkimbi eqinile. Ngezinye izikhathi igama elilodwa, kodwa ukucabanga isimo lapho kwenzeka izikhathi eziningana ngosuku futhi kuthathe ngaphezu konyaka owodwa? Akumangalisi ukuthi abantu ngisho elithile ejwayele ngalesi simo bebancane, bengalondekile futhi kulula ukuhamba konke njengoba sinjalo, hhayi ukulwa, hhayi ukulahlekelwa omncane anakho okwamanje.
Ngakolunye uhlangothi, kuba ngiyisiphukuphuku liyancedisana abantu abaningi ukufinyelela ezinyoni emsebenzini wakho, imfundo, ubuciko kanye nokunye. Kunjani, pho, kungalungile? Kungakhathaliseki eziphakeme azifinyelelanga abantu, ngeke uyojatshuliswa yena, ngakho abakwazi ukuzwa ukugcwala injabulo kanye injabulo impumelelo nempumelelo entsha. Ngalokho kungani ukuba ezifinyelelwe?
umuntu oyedwa kuphela iyajabula futhi anelisiwe ezimpilweni zabo, okuyinto ziqondiswa izifiso zabo. Kukhona iphuzu elibaluleke kakhulu: akunakwenzeka ukuba ngiziqonde izifiso zabo nezenzo ngaphansi ukucindezela ukuzibona ngiyisiphukuphuku njengoba izifiso zakho zangempela kweqiniso. Ukuze uqonde lokhu, zibuze umbuzo: "Ukube bekungekhona ukuthi bebancane yami eziyinkimbinkimbi, ngithanda ukwenza noma ukufeza." Yiqiniso, kungenzeka, kuleli qophelo ithi "yebo", kodwa umbono nganhlanye njengoba ungeke ucabange ukuphila kwami konke ngaphandle lokhu eziyinkimbinkimbi. Konke isihlobo, futhi awazi qhathanisa, ngakho isiphetho uqobo. Nokho, lokhu akusho ukuthi ilungile!
Kukhona elinye futhi iphuzu ezibalulekile - abantu ngeke sikwazi lokho ukuthi wayenobuhlobo eziyinkimbinkimbi noma kanzima ukuzama ukungamukeli leli qiniso: "Nginayo i ngiyisiphukuphuku? Umbhedo! Lokho akunakwenzeka! ". Iqiniso lokuthi ezimbalwa kuphela mahhala izakhiwo, iningi abantu abathintekayo nabo ngezindlela ezingafani. Phendula ngokweqiniso imibuzo elandelayo:
Ngithanda ukubukeka kwami?
Ngizibheka ukuba ohlakaniphile?
Ngithanda ukuxhumana nabantu?
Uma le mibuzo iyaphendulwa negative, kusho ukuthi kukhona ukuzibona ngiyisiphukuphuku! Kodwa ukuqaphela yenkinga futhi ukuqashelwa ukuthi ukhona - 80% izinqumo zayo, uma kungezona zonke-95%.
Isinyathelo esilandelayo ukuqonda isizathu sokuthi kungani kwakukhona ukuzibona ngiyisiphukuphuku, futhi banqobe kufanele kube umgomo wakho. Ubani musa wena wabeka nanku eziyinkimbinkimbi, lapho ebemise khona akabonakalanga, isizathu sangempela - ukuthi awazi uzithanda wena. Leli qiniso elula kubo bonke, kepha thina ngenkani uqhubeke ukundlula uhlangothi lwalo. Ungakwenza kanjani ukuthandana, uma ungenawo ukuzithanda? Ubani ukuhlonipha uma ucabanga bengelutho lenhlonipho? Labo abanesifiso ukuxhumana nawe, uma niyalidelela wena ukuthi ungumuntu Jerk? Uma ukungqubuzana akho, akufanele ulinde kuze kube nokuqonda futhi bathande kwabanye?
K izakhiwo kumelwe lithathwe ngokungathí sina, abakwazi indiva noma sengathi abekho. Is they ukuletha umuntu ukucindezeleka, ukukhathazeka futhi aze azibulale. Ngaphandle yokuxazulula le nkinga, wena kuyonezela ke.
Khumbula, - umuntu esiyingqayizivele! Wena - i indalo emangalisayo, ubuhle yakho ihlukile futhi ephelele! Thanda ngokwakho - kungcono zemvelo, futhi akukho mayelana ubugovu ukuhlonipha ngokwami esinjengesomuntu, ikwazi ukubonisa uthando, ukwenza okuhle nokuphana, ukunikeza injabulo kwabanye. Wena - ucezu kuleli zwe, futhi wayengasakwazi ngaphandle kwakho kungaba kuhle kakhulu! Wena zinenjongo eyodwa - ukuze sijabule!
Ekugcineni, khumbula eyodwa zwi adumile: "Phatha abantu ngendlela ongathanda bakuphathe ngayo." Bazihluphe ngokukweluleka. ke: "Ziphathe ngendlela ongathanda ukuba esebenza kuwe enye." Futhi uma siqonde umahluko, umhlaba wonke ivula phambi kwakho!
Yiziphi izinhlobo senhliziyo kanye nezici zabo ngokwengqondo
Genius - ithalenta, eziphiweni onazo noma ukusangana?
Kwabaholi bezombangazwe kanye nezici zayo isici
Crimping impintshisi - ithuluzi esisemqoka Electricians
KAFKA UFranz (Franz KAFKA). Imisebenzi, biography, izithombe